Dhamaan wararka ku saabsan HTC M10 cusub | Wararka IPhone
Dhamaan wararka ku saabsan HTC M10 cusub
Kaliya maahan in aadanuhu ku noolaado iphone-ka oo cadeyn u ah tan, waxaa waajib nagu ah inaan daabacno macluumaadka la xiriira boosteejooyinka shirkadaha kale ay ka bilaabaan suuqa, dhamaadka-dhamaadka terminals. Haddii aan horey uga soo hadalnay Samsung Galaxy S7, hadda waa markiisa in laga hadlo HTC M10 cusub, oo ah terminal ay shirkadda Taiwanese wuxuu doonayaa inuu isku dayo inuu ka helo meel ka mid ah terminaalka sare ee Android. Tan iyo markii ay HTC soo bandhigtay kala duwanaanta M, qalabkeeda oo dhan had iyo jeer waxay lahaayeen xoogaa naafonimo ah (kamarad, diirimaad, waxqabad) taas oo ku fashilantay inay qabato xiisaha dadweynaha.
HTC M10-ka cusub ayaa yimid suuqa si uu isugu dayo inuu ula tartamo astaanta cusub ee shirkadda Kuuriya ee Samsung gudaha suuqa Android iyo sidoo kale iPhone 6s inkasta oo ay ku jiraan heer ka duwan. Gudaha HCT M10 waxaan ka helnaa Processor Snapdragon 820, oo leh 4 GB oo RAM ah iyo noocii ugu dambeeyay ee Android Marsmallow, 6.0.1.
Gudaha waxaan ka helnaa 32 ama 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah oo aan ku ballaarin karno hadba baahidayada iyada oo loo marayo booska kaarka micro SD. Shaashadu waxay fariisaneysaa meel udhaxeysa iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus, tan iyo wuxuu na siiyaa 5,2 inji oo leh xallinta 2.560 x 1.440, oo leh codsi cufnaan ah 564.
Sidii munaasabadihii hore oo kale, shirkadda HTC waxay dooratay inay adeegsato kuhadalka daabacaadda BoomSound Hi-Fi, iyadoo lagu darayo laba kuhadal (sare iyo hoose) qalabka. Batariga, cidhibta Achilles ee dhammaan taleefannada casriga ah ee hadda jira ayaa ah 3.000 mAh oo waxay taageertaa hawsha 'Charge Quick Charge' laga bilaabo Qualcomm, oo noo oggolaaneysa inaan si dhakhso leh ugu qaadno qayb weyn oo ka mid ah baytariga daqiiqado yar gudahood.
Kaamirada gadaal ee qalabka ayaa gaaraya 13 MPX iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyada UntraPixel 2 oo leh furitaanka f / 1,8 halkaas oo baahida iftiinka si weyn hoos loogu dhigo. Wejigiisa hore waxaan ka helaynaa 5 kamarad MPX ah oo inta badan loogu talagalay in la iska qaado. Qiimaha aaladdan, HTC waxba ma gaari doonto haddii ay ilaaliso sicirka hore ee 749 euro oo ay ku shaacisay soo bandhigida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dhamaan wararka ku saabsan HTC M10 cusub
Kala duwanaanshaha cayayaanka laga soo bilaabo 1970 wuxuu ku dhejin karaa aalado leh nooc ka horreeya iOS 9.3.1
Toddobaad leh IPhone SE: Jeegaanta afarta inji